नायकभन्दा छैनन् कम, पुजासंग नाम जोडिएपछी युद्ध बानियाँको चर्चा (तस्विरहरु) - www.dthreeonline.com
नायकभन्दा छैनन् कम, पुजासंग नाम जोडिएपछी युद्ध बानियाँको चर्चा (तस्विरहरु)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०७८ समय: ११:३३:४७
ईटहरी/ यतिबेला सामाजिक संजालमा युद्ध बानियाँको निकै चर्चा हुने गरेको छ । अभिनेत्री पुजा शर्मासंग प्रेमका कारण नाम जोडिएपछी उनको चर्चा सुरु भएको हो । पुजा र युद्ध मिडियामा मुख्य हेडलाईन भएपनि यसबारे दुबैले हालसम्म केही बोलेका छैनन् । अभिनेत्री पुजा शर्मा पछिल्लो समय प्रेमका कारण निकै चर्चामा हुन्छिन् । उनको प्रेम चर्चा अभिनेता आकाश श्रेष्ठसंग चल्यो । यसभन्दा पहिले सुदर्शन थापा, प्रदिप खड्कादेखि पल शाहसम्म चल्यो । अहिले भने युद्धसंग उनको नाम प्रेमकै कारण जोडिएको हो ।
केही अगाडि शर्माले ‘कसैलाई बुझ्दैछु तर, त्यो आकाश हैन’ भनेकी थिइन् । यतिबेला त्यो ब्यक्ति युद्ध नै हुन भनेर धेरैले अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । अब यो कुरा कत्तिको सत्यता सावित हुन्छ ? त्यो त आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ । युद्ध चलचित्र क्षेत्रका त हैनन् तर, उनी यो क्षेत्रमा नआउलान् भन्न सकिने अवस्था भने छैन । कारण, उनको लगाव यो क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । उनी केही समय अगाडि सम्पन्न सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘द फेस’ पहिलो सिजनको बिजेता समेत हुन् ।
यसअर्थमा उनको चलचित्रमा अभिनेताको रुपमा डेब्यु हुन्छ भन्न सकिन्छ । कतै पुजाले नै आफ्नो आगामी फिल्ममा युद्धलाई डेब्यु त गराउदै छैनन् ? एउटा प्रश्न यो पनि उब्जिएको छ । पुजासंग नाम जोडिएपछी सामाजिक संजाल ईन्स्टाग्राममा युद्धको फलोअर्स बढिरहेको छ । शारीरिक बनावट र लुक्स हेर्दा उनी कुनै अभिनेता भन्दा कम छैनन् । सामाजिक संजालमा पनि उनको सुगठित शरीरको यस्तै चर्चा चलिरहेको छ । हेटौंडा जन्मघर भएका युद्ध ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आएका छन् । जिम पारखी युद्ध यसैसंग सम्बन्धित प्रोटिन लगायतका खाद्यन्न ब्यवसायमा छन् । हेर्नुस् युद्धका केहि आकर्षक तस्वीरहरु ।